Flexo ပုံနှိပ်စက်ရုံ | China Flexo ပုံနှိပ်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ
Smart-340 ယူနစ်အမျိုးအစား ၆ အရောင်များ Flexograph ပုံနှိပ်စက်
၁။ Smart-340 ယူနစ် flexo ဖိစက်များသည်အမြန်နှုန်းနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်မားသောအရည်အသွေးမြင့်တံဆိပ်များထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သောကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်စက်ဖြစ်သည်။ ၁၀၅၀mm ကြီးမားသော servo motor ဖြင့်လှိမ့်လိုက်ခြင်းသည် roller ကိုတည်ငြိမ်စေပြီးအဆုံးတွင်အလိုအလျောက်ရပ်တန့်စေသည်။ 2. ဒီစက်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရွယ်အစားနှင့်တိုတောင်းသောဝဘ်လမ်းကြောင်း, ပစ္စည်း၏စွန့်ပစ်စောင့်ရှောက်။ ၃။ စက်အပြည့်တပ်ဆင်ထားသော servo မော်တာအားလုံးကိုအသုံးပြုသည်။ စုစုပေါင်း ၂၅ ပီစီ servo motor၊ unwinding unit, rewinding unit, nipping roller နှစ်ခု၊ ပုံနှိပ်စက် ၈ လုံး၊ သေဆုံးဖြတ် ၂ ခုရှိသည်။
Atlas480-5B Flexo ပုံနှိပ်စက်
mounting machine တစ်ခုစီအုပ်စုတစ်ခုစီတွင်ကြွေပြား anilox roller (5pc) (Lpi optional) ရှိသည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းဆလင်ဒါသုံးစုံ (၃ × ၅ = ၁၅pc) အလှည့်ဘားဖြင့်လွိုင်းစခန်းနှင့်အတူအလှည့်ကျသောဖြတ်တောက်သောအနေအထားဖြင့်မာလှူဘစ်ရှီဖိအားပေးစက်တစ်ခု။ , ဂျပန်) rewinding tension Controller (တရုတ်) ၁။ မှင်ပျံ့နှံ့ရန် anilox roller ကိုလက်ခံပါ။ ၂ ။ ပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်လှည့်ခြင်းကို magnet power brake, clutch (သို့မဟုတ် Japan တွင်လုပ်သော mitsubish ၏ automatic tension Controller) မှထိန်းချုပ်သည်။ ကြော်ငြာကြော်ငြာ ...
Atlas480-5D Flexo ပုံနှိပ်စက်
One Stacker အုပ်စုတိုင်းတွင်ကြွေထည် anilox roller (5pc) တစ်ခုစီရှိသည် (Lpi optional) ပုံနှိပ်ဆလင်ဒါသုံးစုံ (၃ × ၅ = ၁၅pc) ၀ က်ဘ်လမ်းညွှန်နှင့်အတူလိုင်းစခန်းနှင့်သံလိုက်ဆလင်ဒါဖြင့်သံကြိုးတပ်ဆင်ထားသောသံကြိုးတစ်ချောင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းတင်းမာမှုထိန်းချုပ်မှု (Mitsubishi, Japan) One rewinding tension Controller (တရုတ်) Sheeting station ဖြင့်ဗီဒီယိုမော်နီတာဝယ်ယူရန်ဖွဲ့စည်းပုံ UV Varnishing Cold Stamping ၁။ မှင်ပျံ့နှံ့ရန်ကြွေ anilox roller အားလက်ခံခြင်း ၂။ ပြန်လည်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်လှည့်ခြင်းများကိုသံလိုက်အားဖြင့်ဘရိတ်၊
၁။ မှင်ပျံ့နှံ့ရန်အတွက်ကြွေပြား anilox roller ကိုမွေးစားပါ။ ၂။ ပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်လှည့်ခြင်းကို magnet power brake, clutch (သို့မဟုတ် Japan တွင်လုပ်သော mitsubish ၏ automatic tension Controller) မှထိန်းချုပ်သည်။ ၃။ ပုံနှိပ်ယူနစ်တစ်ခုစီတွင်မှတ်ပုံတင်ရန် ၃၆၀ ဒီဂရီအသုံးပြုသည်။ ပုံနှိပ်စက်တွင် IR drier တစ်ခုရှိသည်။ ၅။ မှင်ခြောက်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ရာဘာစက်သည်ကားရပ်နေစဉ်အတွင်းအလိုအလျောက်ကွဲထွက်သွားပြီးအမြန်နှုန်းဖြင့်ပြေးနိုင်သည်။ ၆။ မှင်ခြောက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်။ ..
ADF-1262 အထည်အလိပ် Label Flexo ပုံနှိပ်စက် 6C + 2C
၁။ ၎င်းကို flexo တံဆိပ်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်ဖဲကြိုးများ၊ ဝါဂွမ်းတိပ်များသုံးခြင်း။ polyester ဖဲ; နိုင်လွန် taffeta၊ စက္ကူတိပ်နှင့်ဖဲကြိုးတိပ်နှင့်စသည်။ ၂။ စက်များကိုပိုမိုကြာရှည်ခံစေသည့်တိကျသောစက်ကိရိယာများနှင့်ဒီဇိုင်းအစီအစဉ်များ ၃။ တိကျသောအရောင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင်မရပ်မနားစက်၊ overprint ၏တိကျမှု± 0.1 mm 4. ၄ ပြွန်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းများကိုပုံနှိပ်နိုင်သည် အဆီပြန်အခြေပြု - မှင်နှင့်ရေအခြေခံ - မင် ၅။ အရောင်နှင့်တောက်ပသည်တောက်ပသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ ...
Atlas-330 အလိုအလျောက်အသေးစားတံဆိပ် stacked Flexographic ပရင်တာ
၁။ အဓိကမော်တာသည်သွင်းကုန်အင်ဗာတာကို သုံး၍ မြန်နှုန်းမြန်သောညှိနှိုင်းမှုကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ၂။ အစာကျွေးခြင်းနှင့်လှည့်ပြန်ခြင်းကိုသံလိုက်အမှုန်ဘရိတ်နှင့် clutch (Janpanese Mitsubishi auto tension controller) မှထိန်းချုပ်သည်။ 3. Unwinder system ကို edge လမ်းညွှန်အာရုံခံကိရိယာမှထိန်းချုပ်သည်။ ၄။ ကြွေထည်ပစ္စည်း anilox roller ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ၀ တ်ဆင်နိုင်ခြင်းနှင့်ချေးခြင်းတို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်လဲလဲလဲနေသော roller များ၏အချိန်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ပိုမိုထိရောက်ပါသည်။ ၅ ။
၁။ Smart-340 ယူနစ် flexo ဖိစက်များသည်အမြန်နှုန်းနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်မားသောအရည်အသွေးမြင့်တံဆိပ်များထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သောကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်စက်ဖြစ်သည်။ ၁၀၅၀mm ကြီးမားသော servo motor ဖြင့်လှိမ့်လိုက်ခြင်းသည် roller ကိုတည်ငြိမ်စေပြီးအဆုံးတွင်အလိုအလျောက်ရပ်တန့်စေသည်။ 2. ဒီစက်အရွယ်အစားနှင့် ၀ က်ဘ်လမ်းကြောင်းတိုတိုသည်ပစ္စည်းများကိုအလဟ keeps ဖြစ်စေသည်။ ၃။ စက်အပြည့်တပ်ဆင်ထားသော servo မော်တာအားလုံးကိုအသုံးပြုသည်။ စုစုပေါင်း ၂၅ ပီစီ servo motor၊ unwinding unit, rewinding unit, nipping roller ၂ ခု၊ ပုံနှိပ်စက် ၈ လုံး၊ သေဆုံးဖြတ်စက် ၂ ခုရှိသည်။
၁။ မှင်ပျံ့နှံ့ရန် anilox roller ကိုလက်ခံပါ။ ၂။ လှိမ့်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်လှည့်ခြင်းများကို magnet power brake, clutch (သို့မဟုတ် Japan တွင်လုပ်သော mitsubish ၏ automatic tension Controller) မှထိန်းချုပ်သည်။ ၃။ ပုံနှိပ်စက်တစ်ခုစီတွင်မှတ်ပုံတင်ရန် ၃၆၀ ဒီဂရီအသုံးပြုသည်။ ယူနစ်တစ်ခုတွင် IR အပူပေးစက်တစ်ခုရှိသည်။ ၅။ မှင်ခြောက်ခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ကားရပ်နားနေစဉ်နှင့်အနိမ့်မြန်သောနှုန်းဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည့်ရာဘာစက်သည်အလိုအလျောက်ပြိုကွဲသွားနိုင်သည်။ ၆။ အဓိကမော်တာကိုတင်သွင်းသောအကြိမ်ရေပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုပြောင်းလဲခြင်း ၇။ Unwinding, pri ...